स्पष्टता: वेबसाइट अप्टिमाइजेसनको लागि नि: शुल्क हीटम्याप र सत्र रेकर्डिङ | Martech Zone
बिहीबार, डिसेम्बर 30, 2021 बिहीबार, डिसेम्बर 30, 2021 Douglas Karr
हामीले हाम्रो लागि अनुकूलन Shopify विषयवस्तु डिजाइन र विकास गरे जस्तै अनलाइन पोशाक पसल, हामी यो सुनिश्चित गर्न चाहन्थ्यौं कि हामीले एक सुन्दर र सरल ईकमर्स साइट डिजाइन गर्यौं जसले तिनीहरूका ग्राहकहरूलाई भ्रमित वा अभिभूत नगर्ने। हाम्रो डिजाइन परीक्षणको एउटा उदाहरण थियो थप जानकारी ब्लक जसमा उत्पादनहरू बारे थप विवरणहरू थिए। यदि हामीले पूर्वनिर्धारित क्षेत्रमा खण्ड प्रकाशित गर्यौं भने, यसले मूल्यलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा तल धकेल्छ र कार्ट बटनमा थप्छ। यद्यपि, यदि हामीले तलको जानकारी प्रकाशित गर्यौं भने, आगन्तुकले छुटाउन सक्छ कि त्यहाँ थप विवरणहरू थिए।
हामीले उपयुक्त नामको टगल सेक्शन बनाउने निर्णय गर्यौं थप सूचना। यद्यपि, जब हामीले यसलाई साइटमा प्रकाशित गर्यौं, हामीले तुरुन्तै देख्यौं कि आगन्तुकहरूले यसलाई विस्तार गर्न खण्डमा क्लिक गर्दैनन्। फिक्स एकदम सूक्ष्म थियो... खण्ड शीर्षकको छेउमा एउटा सानो सूचक। एक पटक यो लागू भएपछि, हामीले हाम्रो तातो नक्सा हेर्यौं र देख्यौं कि आगन्तुकहरूको एक ठूलो संख्याले अब टगलसँग अन्तरक्रिया गरेको छ।
यदि हामीले सत्रहरू रेकर्ड नगरेको भए र तापम्यापहरू उत्पादन नगरेको भए, हामी समस्या पहिचान गर्न वा समाधानको परीक्षण गर्न सक्षम हुने थिएनौं। जब तपाइँ कुनै पनि प्रकारको वेबसाइट, ईकमर्स साइट, वा एप्लिकेसनको विकास गर्दै हुनुहुन्छ भने हीटम्यापिङ अनिवार्य हुन्छ। उसले भन्यो, गर्मी म्यापिङ समाधानहरू धेरै महँगो हुन सक्छ। धेरैजसो आगन्तुक वा सत्रहरूको संख्यामा आधारित हुन्छन् जुन तपाईंले ट्र्याक वा रेकर्ड गर्न चाहनुहुन्छ।
धन्यबाद, हाम्रो उद्योग मा एक विशाल एक नि: शुल्क समाधान उपलब्ध छ। माइक्रोसफ्ट स्पष्टता। केवल तपाईंको साइटमा वा तपाईंको ट्याग व्यवस्थापन प्लेटफर्म मार्फत स्पष्टता ट्र्याकिङ कोड घुसाउनुहोस् र सत्रहरू क्याप्चर हुने बित्तिकै तपाईं केही घण्टामा चल्दै हुनुहुन्छ। अझ राम्रो, क्ल्यारिटीसँग गुगल एनालिटिक्स एकीकरण छ... तपाईंको गुगल एनालिटिक्स ड्यासबोर्ड भित्र सत्र प्लेब्याकहरूमा सुविधाजनक लिङ्क राख्दै! स्पष्टताले कस्टम आयाम भनिन्छ स्पष्टता प्लेब्याक URL पृष्ठ दृश्यहरूको एक उपसेट संग। साइड नोट... यस समयमा, तपाईंले स्पष्टतासँग एकीकृत गर्न एउटा वेब सम्पत्ति मात्र थप्न सक्नुहुन्छ।
माइक्रोसफ्ट स्पष्टताले निम्न सुविधाहरू प्रदान गर्दछ ...
तत्काल तातो नक्शा
तपाईंका सबै पृष्ठहरूको लागि स्वचालित रूपमा तापनक्साहरू उत्पन्न गर्नुहोस्। मानिसहरूले कहाँ क्लिक गर्छन्, उनीहरूले के बेवास्ता गर्छन् र कति टाढा स्क्रोल गर्छन् हेर्नुहोस्।
सत्र रेकर्डि .हरू
सत्र रेकर्डिङका साथ मानिसहरूले तपाईंको साइट कसरी प्रयोग गर्छन् हेर्नुहोस्। के काम गरिरहेको छ अन्वेषण गर्नुहोस्, के सुधार गर्न आवश्यक छ जान्नुहोस्, र नयाँ विचारहरू परीक्षण गर्नुहोस्।
अन्तर्दृष्टि र खण्डहरू
छिटो पत्ता लगाउनुहोस् जहाँ प्रयोगकर्ताहरू निराश हुन्छन् र यी समस्याहरूलाई अवसरहरूमा बदल्नुहोस्।
स्पष्टता GDPR र CCPA तयार छ, नमूना प्रयोग गर्दैन, र खुला स्रोत मा निर्मित छ। सबै भन्दा राम्रो तपाईं बिल्कुल शून्य लागत मा स्पष्टता को सबै सुविधाहरू आनन्द लिनुहुनेछ। तपाईं कहिले पनि ट्राफिक सीमाहरूमा भाग्नुहुने छैन वा सशुल्क संस्करणमा अपग्रेड गर्न बाध्य हुनुहुने छैन... यो सधैंको लागि निःशुल्क छ!
Microsoft स्पष्टताको लागि साइन अप गर्नुहोस्
टैग: स्पष्टताecommerce अनुकूलनमाइक्रोसफ्ट स्पष्टतासत्र रेकर्डिङसाइट अनुकूलनपरीक्षणवेबसाइट अनुकूलन